Akuyona i-Google kuphela - isazi se-Semalt esixoxisayo ukuthi kungani ukulungisela ezinye izinjini zokusesha
Uma wenza i-e-commerce, i-SEO ingumgogodla wokuthola amaklayenti emhlabeni jikelele kanye nokwandisa ukuguqulwa kwezivakashi kumakhasimende. Noma kunjalo, kokuthunyelwe okuningi, sikhuluma nge-Google kuphela uma sikhuluma ngokusebenza kwe-search engine. Abantu abaningi kufanele bafunde ukuthi i-SEO ingumqondo, hhayi inqubo, futhi ingafaka izicelo ezinjini eziningi zokusesha - fiche de pointage horaires. Okuhlangenwe nakho kwenkampani yethu kuqinisekisa ukuthi ukusebenzisa i-Google yodwa njengoba injini yokusesha yokwandisa kuyiphutha elibi. Kusuka kuma-dashboards amaningi kuwebhu, izinjini zokusesha kuphela indlela yokuthola amaklayenti ku-inthanethi, hhayi kuphela. I-Google ingenye yalezi zinjini zokusesha, ezenzeka ukuthi zinokulandelayo okukhulu.
Njengomthengisi we-intanethi, ukukhathazeka kwakho okuyinhloko kulandela amakhasimende emhlabeni wonke usebenzisa i-intanethi njengendlela yakho. I-SEO yindlela yokuthengisa ye-digital okuyinto ukuphumelela okuyinhloko ngamagama angukhiye amaningi namamethrikhi anayo. Lokhu kwenzeka ukuthi i-Google akuyona indlela kuphela yokusebenzisa le mqondo. Kusukela kuma-analytics, i-Google imane iphikisana ngoba iyona injini enkulu yokusesha futhi inemininingwane ephelele mayelana nokusetshenziswa.
uNik Chaykovskiy, iMenenja yeMpumelelo Yomthengi Ephezulu i-Semalt Amasevisi weDivaysi, uchaza ukuthi kungani abathengisi bedijithali kufanele bacabange ngendlela engaphezu kwamandla okucinga.
Zikhona yini ezinye izindawo?
i-Google akuyona indawo kuphela ongabhala izinto zakho. Izinkampani ezinkulu ezifana no-Alibaba ziye zafunda lo mqondo futhi zazisebenzisa. Baye bamisa ngempumelelo futhi benza igunya elivelele emiceleni yabo..Banobukhoma obuqinile be-intanethi. Naphezu kwalokho, amawebhusayithi abo anemoto eqondile engaveli eminjini yokusesha. Lokhu kusho ukuthi ukusebenzisa i-Google kuphela kungaba umkhawulo emizamweni yakho ye-SEO. Isibonelo, umuntu angaya ku-Alibaba ngokuqondile ukufuna into ethile futhi kudlule i-Google. Ukusebenzisa lo mqondo, ungasebenzisa:
Abathengi abaningi bangakhetha ukucinga izinto ku-eBay. Lo mgwaqo awubonakali kuzinjini zokusesha. Umthengisi omuhle we-inthanethi uzolula izinto zawo kulezi zinhla zezinga eliphezulu njenge-Google. Amasu we-SEO omdabu asebenza kulawa mawebhusayithi. Isibonelo, igama lomkhiqizo, isithombe, nencazelo ingafaka amagama angukhiye. I-Amazon inehlelo lokubambisana elinganika umthengisi owengeziwe wokuthengisa ikhomishini ekutholeni izinto ozithengisayo.
Ezinye izinjini zokusesha.
Uma wenza i-SEO, kunamanye ama-niches ongawasebenzisa ukuze uthole kwezinye izimakethe. Isibonelo, ababhulogi abaningi bathole ukusetshenziswa kwe-Bing ne-Yahoo ukulanda noma yikuphi amaklayenti e-inthanethi. Akubona bonke abantu abhekisela ku-Google imibuzo yokucwaninga. Kusuka kudeshibhodi yamabhulogi amaningi, ezinye izinjini zosesho zingaletha amanye amaklayenti ayigugu kakhulu.
Njengomthetho, okuqukethwe kwe-SEO kukhomba ku-Google. Abantu abaningi bangase bazibuze ukuthi kuyadingeka yini ukuthuthukisa amawebhusayithi we-Google kuphela. I-Google yedwa akuyona yedwa injini yokusesha enekhono lokuzuza isayithi lakho. Ezimweni eziningi, i-Google iyinjini yokusesha enkulu kakhulu. Noma kunjalo, umbono wezimakethe zedijithali ngokuvamile uvame ngaphezu kwe-Google kuphela. Omunye ucabanga ngaphesheya kwezinjini zokusesha lapho enza ukumaketha kwe-intanethi. Lokhu kusho ukuthi i-SEO ingumqondo ongadlula kuwo wonke amapulatifomu e-intanethi.